Posted by shiikha on 02/02/2013 18:11:17
Dhamaanba Aqoonyahanadaan Isboorti ee magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin waxaa ay Tacsi Tiiraanyo leh u dirayaan Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida ee Atlanta Mudane Inj. Cumar A. Shekey oo walalkiisaAllaha u naxariistee Marxuum Cabdulqaadir A. Shekey uu ku geeriyooday Magaaladda Mombasa ee Dalka Kenya....waxaana aan Eebe uga baryeynaa in uu Marxuumkaas janadiisii fardawsa aheyd ka waraabiyo,eheladii uu ka tagayna samir iyo iimaan ka siiyo (Aamiin).
Tacsidan waxaa diraya dadka magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin:
2)Tababare Maxamed Xaaji Giftin
6)Cabdirisaaq Cali Aar(Cali Mataan0|-
9)Cali Maxamed(Cali Bay)
12)Cabdulaahi cabdi Maamuus
17)Maxamed Suufi Abashekh(Madaxa Dahabshiil ee Atlanta)
18)Inj. Maxamed Cabdulaahi (Kamuudi)
19)Xamza S. Xamsa(Gudoomiyaha Isboortiga ee Kentucky)
20)Cabdulaahi Xirsi Cabdi(Gudoomiyaha Isboortiga ee Maine)
21)Cabdicasiis Xaaji Giftin
Sidoo kale waxaa iyaguna tacsi taas la mid ah diraya bahda isboortiga ee gobolka Minnesota oo iyagu u tacsiyadaynaya guddoomiyaha jaaliyadda Atlanta Eng,Omar A. sheekey oo walaalkiisa marxuum Abdulqadir A, sheekey uu ku geeriyooday magaalada Mombasa.
Waxaan marxuumka Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno Eebe ka waraabiyo, qoyskii,qaraabadii iyo eheladii uu ka baxayna samir iyo iimaan naga wada siiyo dhammaanteenba.